Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Koreana
Famoronana firafitra: lamba tsy tenona, hydrogel, sarimihetsika mangarahara.
Endri-pamokarana: ny loko, ny fofona ary ny mpangatsiaka dia azo ampiana, izay azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'izany eny an-tsena, ity vokatra entin'ny orinasa ity dia mampiasa fitaovana japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy. Ankoatr'izay, tsy mora ny milatsaka ity vokatra ity raha oharina amin'ny vokatra an-trano hafa. Ireo vokatra dia naondrana any amin'ny mpanjifa vahiny maro toa an'i Korea atsimo, ary manohy ny fandefasana baiko.
FAMPIANARANA / DETALY Vokatra
1.Miorina lava loatra
2. Nandehandeha be loatra isan'andro
3. Fanatanjahan-tena mafy
4. Manao kiraro avo lava loatra
-Afaka manampy fitrandrahana zavamaniry na menaka esory, fitambarana aromatherapy sy fanorana tongotra
-Tsy misy sisa tavela aorian'ny fampiasana azy
-Vonona hampiasa amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza
-Ny fitrandrahana otra tokana dia manotra ny fanambanin'ny tongotrao ary manentana ny fikorianan'ny rà.
tapaho ary sokafy ny paosy
-Esory ny sary mihetsika mangarahara
-Mampihatra mivantana amin'ny afovoan'ny tongotrao araka ny aseho etsy ambany
-Ny patch iray dia mety miasa mandritra ny 8-12 ora fa mahatsiaro manary azy isaky ny mahatsapa fa ilaina ianao
Ity fantson-tongotra ity dia misy lamba tsy misy tenona sy firakotra gel. Ny sosona tsy tenona dia tsy misy tokony dokambarotra, mitovy daholo ny rehetra. Hifantoka amin'ny fampidirana hydrogels aho. Ny famolavolana hydrogels dia novolavolaina ho setrin'ny filan'ny mpanjifa. Ity vokatra ity dia nasain'ny mpanjifa Koreana. Ny fangatahan'izy ireo dia ny hanana fofona samy hafa. Mora ny mitantana izany, raha mbola mampiditra fofona hafa ianao. Ilaina koa ny fahazoana miraikitra tsara, ity no tsiambaratelonay manokana, tsy afaka milaza aminao aho. Ny orinasa dia nitady orinasa varotra anatiny. Ity orinasam-barotra ity dia nahita mpanamboatra hafa hamokatra fiparitahan'ny tongotra mifototra amin'ny fitsipiky ny fihenan'ny vidiny, ary avy eo namokatra azy ireo indray tao amin'ny orinasanay aorian'ny fotoana maromaro. Aorian'ny fahazoana azy dia tsy miraikitra ireo mpanamboatra anatiny, ary milatsaka izy ireo rehefa afaka kelikely, ary avy eo ny haavon'ny rano dia tsy avo tahaka ny antsika.
Ny haavon'ny rano ao amintsika dia avo dia avo amin'ireo karazan-hydrogel mitovy, indrindra satria mampiasa fomba fanasitranana hermetika isika, izay manasitrana nefa tsy very ny hamandoana ary manana atin'ny rano avo. Ity no famokarana an-trano an-hydrogel hafa izay lafiny iray amin'ny tsiranoka.
Raha liana amin'ny vokatray ianao, azafady miantso na mailaka mba hifampidinihana.
Teo aloha: Patch tsy misy tenona
Manaraka: Ny fanafody nentim-paharazana fanafody fitsaboana sinoa
Patch amin'ny tongotra